गंगा नदीमा फेला परेको यो माछाबाट बैज्ञानिकहरु हैरान, फैलियो डर ! – Khabaarpati
October 19, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on गंगा नदीमा फेला परेको यो माछाबाट बैज्ञानिकहरु हैरान, फैलियो डर !
काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकामा पाइने एक माछा गंगा नदीमा फेला परेको । माछा फेला परेसँगै वैज्ञानिकहरूको टाउको दुःखाई सुरु भएको छ । हजारौं किमी टाढा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा पाउने माछा वाराणसीको गंगा नदीमा भेटिएसँगै सबै चकित परेका हुन् । यसको नाम माउथ क्याटफिश रहेको छ । वाराणसीबाट रोशन जयस्वालको रिपोर्ट
नदीहरूले आफ्नो गहिराइमा धेरै रहस्यहरू लुकाएका हुन्छन् । वाराणसीको रामनगर गाउँको रम्ना गाउँमा डल्फिनको संरक्षण र उद्धारमा संलग्न गंगा प्रहारिसको टोलीले माछाको रूपमा अद्भुत फेला पारेका हुन् । उक्त माछा गंगा नदी मात्र होईन, बल्कि भारत र दक्षिण एशियामा पनि कतै फेला परेको थिएन् ।अनौंठो अनुहार भएको माछा हेर्दा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा पाउनेजस्तो देखिएको थियो । हजारौं किलोमिटर टाढा पाउने सुकरमाउथ क्याटफिस जस्तो देखिन्थ्यो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
वैज्ञानिकहरूले दावी गरे कि यो माछाले गंगाको पर्यावरणलाई बिगार्न सक्छ । वैज्ञानिकहरूले यो पनि बताए कि उक्त माछा गंगामा फेला परेपछि छोड्न हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ कि हजारौं किलोमिटर टाढा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा पाउने सार्कमाउथ क्याटफिस कसरी गंगा नदीमा पुग्यो ?यसको उत्तर बीएचयूको जीव वैज्ञानिकहरूसँग थियो । माछा वैज्ञानिक प्रोफेसर बेचनलालले भने, ‘यो माछा दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ, जसलाई सकरमाउथ क्याटफिस भनिन्छ ।
सकरमाउथ क्याटफिस धेरै रंगहरूमा पाउन सकिन्छ, तर गंगामा यसको शुरूआत गंगाको पर्यावरणका लागि ठूलो खतरा हो किनभने यो माछा मांसाहारी हो र वरपरका जन्तुहरू खाएर बाँचिरहेको हुन्छ । यस कारणले, यसले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण माछा वा जीवलाई हुर्कन दिदैन, जबकि यो माछाको आफ्नै खाद्य मूल्य छैन किनकि यो स्वादहीन छ ।’
उनले थप्दै भने, ‘यस अर्थमा यो गंगाको पर्यावरणका लागि ठूलो खतरा हो । अब, गंगा जस्तो नदीमा पसे पछि यसको विस्तार रोक्न सकिदैन । यो माछा यसको सौन्दर्यका कारण आर्माणमेन्टल माछाको नजरमा पर्दछ र मानिसहरूले यसलाई शौकका लागि एक्वैरियममा खुसीसाथ पाल्छन् तर जब क्याटफिस बढ्छ तब यसलाई गंगामा छोड्छन् । त्यसो गर्दा अब धेरै गलत नतिजाहरु आउँदैछ ।’
हिजो घटेको सुनको मुल्य आज यस्तो छ
February 18, 2021 February 18, 2021 goodmam
बिजय शाहीले हामिलाई थाङ्नामा सुताउनुको पछाडी ऋषि धमला, रबी लामिछाने र भाग्य न्यौपाको ठुलो हात छ भन्दै खुल्यो यस्तो रहस्य – भिडियो सहित July 29, 2021
सामाजिक सञ्जालमा धरानकी एक सुन्दर युवतीको फिगरको निकै चर्चा, फम लगायो हो ? भन्नेहरुलाई दीईन कडा जवाफ July 29, 2021